ठाँटीकाँधकी हरिकलाका लागि लकडाउन : खानाको लागि न पालिकाको भर, न छ आफ्नै घर !
बन्दाबन्दी लागु भएको नेपालमा आज चौंतिस दिन भएको छ । यो ३४ औं दिनमा आइपुग्दा आफ्नै जग्गा जमिन नभएका, ज्यालामजदुरी गर्नेहरुको अवस्था निरन्तर दयनीय बन्दै गइरहेको छ । ठाँटीकाँध गाउँपालिका वडा नं. एक ठाँटीकाँधमा अर्काको घरमा बस्दै आइरहेकी हरिकला वादी कहिले लकडाउन सकिएला र पेट भरि खान पाउँला भन्ने चिन्तामा रहेकी छिन् ।
‘पहिले माटाको सुल्पा विक्री गरेर भएपनि खाद्यान्नको जोहो गर्थें र पेट पाल्थें । गाउँमा कसैसँग मागेर भएपनि यो पेट भर्ने गरेकी थिएँ ।’ तीन वर्ष अगाडी भत्किएको घर देखाउँदै हरिकलाले भनिन्, ‘श्रीमान वितेको आठ वर्ष भन्दा बढि भएको छ । अहिले त मागेर खाना खाउँ भनेपनि कसैले सजिलै दिने अवस्था छैन ।’ लकडाउनले आफूलाई गाउामा जान बन्देज लगाउँदा भोको बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘एकातिर गाउँमा जान पाइएको छैन, अर्कोतिर जग्गा पनि छैन । थोरै सार्वजनिक जग्गामा खेति लगाइएपनि त्यसले एक महिना पनि खान पुग्दैन । एकल महिला भत्ता पाउने गरेपनि फागुनमा पाइने भत्ता अहिलेसम्म पाइएको छैन । ऋण गरौं कोही पत्याउँदैनन् । कसरी बाँच्ने होला ? के खाने होला ?’ उनले लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दै भनिन्, ‘अर्काको घरमा बस्नु परेको छ । घरको थाडो भत्किाएको छ । अर्काको घरका व्यक्ति आएको खण्डमा बाहिर खुला आकाशमा नै सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।’ कसैले पनि अहिलेसम्म सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ ।
‘दुइ लाख जति भइदिएको भए घर बनाउँथे, रुखो सुको रोटी आफ्नै चुलामा पकाएर खान्थें,’ चौध वर्षको एक छोरासँगै बस्दै आएकी हरिकलाले दुइ हात जोडदै भनिन्, ‘एक एक किलो चामल उधारो ल्याएर खाएको ऋण तिर्न पाएकी छैन ।’ आफु एक्लै भएका कारण के धन्दा गर्नु कसरी गर्नु भन्नेमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘पसल खोलौं भने कहाँबाट खोलौं, शुल्पा विक्री गरेर पनि पर्याप्त आम्दानी हुँदैन । तम्बाकु खाने व्यक्ति गाउँमा कम भएका कारण सुल्पा पनि विक्री हुन छाडेको छ । गाउँपालिकाले कोरोनाबाट जोगिन भन्दै साबुन बाँडेको सुनेकी थिएँ, मैले त त्यो साबुन पनि पाइन,’ उनले भनिन्, ‘गरिब भनेर नाम लेख्ने धेरै आए, खाना र सहयोग गर्ने कोही आएनन् । दुखिहरुकालागि कोही हुँदा रहेनछन् ।’
उनले आफू माइत भएको बेलामा भोट हाल्नको लागि यहाँ बोलाइएको बताउँदै उक्त गुण नेताले चाँडै भुलेको गुनासो गर्छिन् ।
‘ठाँटीकाँध सरकारले अहिलेसम्म भत्ता दिएको भए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउदैन थियो ।’ उनले भनिन्, ‘भोकबाट जोगिने अवस्था खोज्दैछु, सहयोग गरिदिएको भए आभारी हुने थिएँ ।’